Waa Maxay Deymaha Mudada? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks Deynta ugu dambeysa
Deynta ugu dambeysa
Waa maxay deynta ugu dambeysa?
Amaahda kama dambaysta ah waa nooc deyn ah dhamaadka muddada deynta lagu heshiiyey lacagta amaah in lagu soo celiyo wadar ahaan. Sidaa darteed, ereyga "kama dambaysta ah" ayaa sidoo kale soo galaya ciyaarta. Deyntii ugu dambeysey waxaa sidoo kale loo tixraacaa deyn aan deynta ahayn oo loo isticmaalo isticmaalka luuqada, sababtoo ah dib u bixinta daynta amaahda ayaa dhacaysa inta lagu jiro muddada amaahda oo aan dib loo bixin. waa. Inta lagu jiro muddada amaahda, deyn bixiyaha waa inuu bixiyaa dulsaar ah oo keliya.
In dhaqanka, sida amaah rasaas ah waxaa inta badan weheliyaan gabagabeeyo heshiiska kaydka ama siyaasadda hibeynta ah, taas oo ka dibna amaahdaana inta lagu jiro muddada ka dibna bixiya. Haddii amaah ka dibna ay dhamaato muddada la filayo, lacagtaas waa ka dibna in la dhameystiro hibeynta ka ama ka soo baxay amaah dhismaha iyo bedelay wadarta this dhanba. The ururada ilaalinta macaamiisha madax banaan laysku xidho sida aan qiimeeyo wanaagsan maxaa yeelay waxa ay sababtay in ay wax amaahdaana by gabagabeeyo heshiis dheeraad ah oo dheeraad ah iyo kharashka maamulka dheeraad ah oo inta badan uusan ka adkaan maturity ee heshiisyada sida taariikhda ee bixinta amaahda. Si kastaba ha noqotee, waxaa badanaa la fuliyaa ficil ahaan.
Danta iyo nooca isticmaalka
Dulsaarka ugu dambeeya waa mid go'an ama isbeddel ah. Daymaha noocaan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa maalgelin ku meel gaar ah. Waa ficil in bangiyada ay waajib ku tahay in ay ka baxaan qandaraasyada dambe ee loo isticmaalo inay dib u bixiyaan deynta. Nooca deynta ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo guri. Markaad maalgelineyso deyn, waxaa jira asaas ahaan laba ikhtiyaar oo loogu talagalay iibsadaha guriga. Waxa uu dib u bixin karaa amaahda si joogto ah inta u dhexeysa qaabab kala duwan. Tani waxaa kale oo loo yaqaanaa amaah amaah magdhow, Xulashada labaad, waa deyn aan dib loo bixinayn (sidaas darteed deynta kama dambaysta ah). Suurtagalnimada labaad waxay guud ahaan kaliya faa'iido u tahay mulkiilaha kirada ah sababtoo ah dulsaarka ku yaal koontaroolka waa canshuur laga jarayo. Marka laga hadlayo mulkiilayaasha guryaha oo qaata amaahdaas, ma jirto wax suurtagal ah in lagu dhimo xiisaha. Taasi waa sababta amaahda dib u bixinta loo isticmaalo kiiskan.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida noocaan deyn ah
Deyn ugu dambeyn ah waxaa loo isticmaalaa inta badan maalgelinta maalgelinta shirkad. Amortization waxaa loo isticmaalaa amortization. Tani waxay sidoo kale suurtagal ka dhigeysaa khatarta credit , sii socoshada muddada amaahda socota. Saamayntaas oo kale ayaa sidoo kale loo abuuray amaahda macaamiisha ee foomkan, kaas oo laga bixiyo dakhliga bisha ee deynta.
Sidoo kale, dib-u-celinta waxaa laga yaabaa inay sidoo kale ka dhacdo kaydka kaydka kaydka ee laga helo mashruuca ay maalgeliso deynta. Hase yeeshee, khatarta deynta ayaa weli isbeddelaysa deyn-bixiyaha inta lagu jiro xilliga oo dhan.
Dhibaatada deyn bixiyaha waa in deynta ah natiijooyinka noocan oo kale ah culeys dheeraad ah oo dulsaarka sababtoo ah ma jirto dib u bixinta joogtada ah ee deynta. Waxaa sidoo kale jira faa'iido darro in ay jirto hal mar oo culeyska sare ah oo ku saabsan taariikhda la rabo in lagu amaahdo noocyada kale ee amaahda. Marka laga hadlayo maalgelinta shirkadaha, culeyska maaliyadeed ee ballanta waxaa laga yaabaa in la yareeyo ama laga saaro dakhliga la filayo laga soo iibiyay hantida hadda ama hantida ama maalgelinta dheeraadka ah.
Rating: 3.0/ 5. Laga soo bilaabo codadka 1.
Amaah deyn ah
Maqaalka xigtaAmaahda shakhsiga ah